कुकुरहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो बाधाहरु - सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ! | कुकुरहरुको संसार
सुसाना Godoy | 13/10/2021 11:16 | कुकुरका सामानहरू
कुकुरहरु को लागी बाधाहरु सुरक्षा तत्वहरु मध्ये एक हो हामीलाई कती राम्रो चाहिन्छ। न केवल उनीहरुको लागी तर हामी वा हाम्रो घर को लागी पनि। यो एक प्रसिद्ध पूरक हो, तर आज तपाइँ उनीहरु को बारे मा अझ धेरै पत्ता लगाउनुहुनेछ, यद्यपि यो जस्तो लाग्थ्यो, तपाइँ यस तत्व को बारे मा सबै कुरा थाहा थिएन।
कुकुर बाधा संग तपाइँ तपाइँको घरमा सीमित ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाइँको घरपालुवा जनावरहरु जब उनीहरु चाहन्छन् पास गर्न सक्दैनन्। चूंकि केहि केहि क्षति को कारण हुन सक्छ र हामी चाहदैनौं कि विशेष गरी जब हामी घर मा छैनौं। तेसैले, एक प्राथमिकता, बाधाहरु मौलिक बन्छन्। पछिको सबै कुरा मा नछुटाउनुहोस्!
सुरक्षा पहिलो सहज बन्द ...
आइरिस ओह्यामा, गेट ...
Hauck बाधा ...
सकुरा SS5259 - बाधा ...
पभुत बाधा ...
पाहुत ब्यारियर संरक्षण ...
1 किन एक कुकुर बाधा किन्न?
2 कुकुर बाधा को प्रकार
2.4 शिकंजा बिना
3 कसरी एक कुकुर बाधा सही तरिकाले छनौट गर्न को लागी
4 के यो कुकुर बाधा किन्न लायक छ?
5 जहाँ एक सस्ता कुकुर बाधा किन्न
किन एक कुकुर बाधा किन्न?
आफ्नो कोठा मा घर मा एक कोठा रूपान्तरण: एक महान विचारहरु हो कि तपाइँ एक कुकुर बाधा को लागी धन्यवाद संग आउन सक्नुहुन्छ यो हो। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक सानो कोठा छ तर तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँ यसको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ। एक घरपालुवा जनावर भएको, विचारहरु पहिले नै यो बाट बच्न को लागी सक्षम बिना बाहिर कूदन सक्छ। तेसैले तपाइँ यसलाई कोठा को सीमांकन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो क्षेत्र मा विभाजित गर्न को लागी, वा ढोका को भाग मा राख्न को लागी र हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को लागी अधिक ठाउँ छोड्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यो कहिले काहिँ यो एक कोठा आफैंमा हुनुहुन्न, तर एक क्षेत्र हो कि हामी वास्तव मा प्रयोग वा लाभ उठाउन सक्दैनौं।
उनीहरुलाई घरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नुहोस्: बाधाहरु छ कि एक आवश्यक कामहरु मध्ये एक यो हो। किनकि यदि हामी उनीहरुलाई छोड्छौं, घरपालुवा जनावरहरु दिनभरि बिभिन्न कोठाहरु भित्र र बाहिर जान्छन्। उनीहरु प्रत्येक मा के छ पत्ता लगाउन मनपर्छ। तेसैले, यो महत्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ उनीहरुलाई घर वरिपरि घुम्नबाट रोक्नुहोस्, ती प्रवेश द्वार वा क्षेत्रहरु मा बाधाहरु राखे कि उनीहरुको लागी निषेध गरिनेछ। तेसैले यो उनीहरुको बाटो अवरुद्ध गर्दछ र केहि उपाय गर्न को लागी गर्न सकिदैन।
तिनीहरूलाई सीढीहरु माथि र तल जान बाट रोक्नुहोस्: जब एक घर को बीच मा सीढीहरु छन्, हामी सधैं अत्यधिक सावधानी को प्रयोग गर्नु पर्छ। किनकि यदि हामी यो बच्चाहरु संग गर्छौं, घरपालुवा जनावरहरु संग पनि। यस अवस्थामा किनभने lस्वास्थ्य समस्या दिन को क्रम हुन सक्छ र हामी तपाइँको जोडिहरु पीडित हुन चाहँदैनन्। तेसैले, प्रलोभनहरु बाट बच्न को लागी, यो सधैं उनीहरुलाई यस तरीकाले रोक्न को लागी राम्रो छ र यो कुकुरहरु को लागी बाधाहरु संग छ।
तिनीहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्नुहोस्: विशेष गरी puppies सबैभन्दा बेचैन छन् र यो सत्य हो कि कहिले काहिं हामी उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं जस्तो हामी चाहन्छौं। त्यसोभए, हामीले केहि तरिकाहरु को बारे मा सोच्नु पर्छ सधैं उनीहरुलाई राम्रो संग नियन्त्रण गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी। बाधाहरु लाई लापरवाही को उपस्थिति बाट रोकिन्छ र यसैले, कि उनीहरु विदेश जान सक्छन्। हामी सधैं उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं र यसले हामीलाई सास फेर्न सजिलो बनाउँछ।
कुकुर बाधा को प्रकार
यो धेरै द्वारा मनपर्ने प्रकारहरु मध्ये एक हो किनकि यसको नाम बाट सुझाव छ, यो फराकिलो वा कम गर्न सकिन्छ। के हामीलाई त्यो बताउँछ विभिन्न ठाउँमा संलग्न गर्न सकिन्छ र त्यो केहि हो जुन हामी माया गर्छौं। यो ढोका को विभिन्न चौडाइ को समायोजन हुनेछ, हामी यो आवश्यक छ, उनीहरुलाई सानो बनाउन सक्षम हुनाले।
यदि तपाइँ बाहिर कुकुर बाधा राख्ने सोच रहे हो, तब धातु एक सबैभन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक हो। उनीहरु त्यो कारण को लागी धेरै प्रतिरोधी छन्, उनीहरुलाई बाहिर राख्न को लागी, तर न केवल उसको लागी तर ती सबै कुकुरहरु को लागी जो कुट्ने मनपर्छ। किनभने यो जस्तै एक फिनिश संग उनीहरुलाई यो धेरै जटिल हुनेछ। धेरै यो ठूलो कुकुरहरु को लागी उपयुक्त छठ्याक्कै त्यो प्रतिरोध को कारणले हामीले उल्लेख गरेका छौं।
बस केहि काठ को बाधाहरु को बारे मा सोच, हामी त्यो जान्दछौं हाम्रो घर को सजावट हामीलाई धन्यवाद हुनेछ। किनकि काठ घर को हरेक कुनामा संयुक्त हुन को लागी एकदम सही छ। त्यसोभए, यो एक हातमा ती सुरुचिपूर्ण विकल्पहरु मध्ये एक हो तर अर्को मा व्यावहारिक पनि छ। किनकि उनीहरु तपाइँको पाल्तु जनावर लाई राम्रो संग सुरक्षित राख्नेछन्। जे होस् यो सत्य हो कि केहि स्क्र्याच वा तिनीहरूलाई काट्ने छनौट गर्नुहोस्।
हामी सधैं सबै भन्दा राम्रो लाभ को आनन्द उठाउन को लागी सक्षम हुन को लागी सबै भन्दा विविध विकल्प छ। यस मामला मा, हामी बारेमा कुरा गरीरहेका छौं screwless बाधाहरु। घर को क्षेत्रहरु ड्रिल गर्न को लागी बच्न को लागी एक सही समाधान। यो सबै भन्दा राम्रो छ कि यो जस्तै एक विचार को लागी जान्छ कि शिकंजा बिना आउँछ। तिनीहरू सामान्यतया चूषण कप र केहि हुकहरु को एक प्रकार हो कि तपाइँ उनीहरु संग सामेल हुनुहुनेछ। तेसैले यो टाँस्न र हटाउन को लागी जब तपाइँलाई यसको आवश्यकता हुन्छ। यस तरीका बाट यो तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकताहरु र तपाइँको घरपालुवा जनावर को अनुसार स्थानहरु लाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी एक कुकुर बाधा सही तरिकाले छनौट गर्न को लागी
सामाग्री: यो महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरु मध्ये एक खाता मा लिन को लागी हो। सामग्री कुकुर बाधा को शक्ति र स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ, त्यसैले हामी सधैं धेरै राम्रो छनौट गर्नुपर्छ। धातुहरु कि प्रतिरोध को लागी हामीले उल्लेख गरेका सबै भन्दा राम्रो विचारहरु मध्ये एक हो, निस्सन्देह यदि तपाइँ यसलाई तपाइँको सजावट को अनुसार जान चाहानुहुन्छ, शायद काठ को एक सबैभन्दा संकेत गरीएको छ। तपाइँ सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ कि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ वा के कदम उठाउनु भन्दा पहिले सुविधाजनक छ।
ऊँचाई: महत्वपूर्ण कारक जहाँ त्यहाँ छन् किनकि हामी हाम्रा घरपालुवा जनावरहरु लाई अवस्थित हुनु पर्छ जहाँ उनीहरु र यो को लागी, पहिले हामी जनावर को आकार को बारे मा सोच्नु पर्छ। किनकि त्यहाँ हामी बाधा को उचाई निर्धारण गर्नेछौं। तार्किक रूपमा उनीहरु एक सानो उच्च हुनेछ यदि हामी एक मध्यम वा ठूलो आकार कुकुर को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं। तर साना बच्चाहरु को लागी, उनीहरु लाई धेरै उचाइ को आवश्यकता छैन किनकि उनीहरु टाढा हुदैनन्।
चौड़ाई: यहाँ, हाम्रो कुकुर बाधाहरु कती फराकिलो छ, पत्ता लगाउन को लागी हो सोच्नुहोस् कि हामी उनीहरुलाई कहाँ राख्छौं। किनकी कहिले काहिँ उनीहरु केवल ढोका वा मेहराब मा हुनेछन् कि एक प्रवेश द्वार को रूप मा कार्य गर्दछ, त्यसैले त्यहाँ हामी तिनीहरुको चौडाई मापन गर्न को लागी हुनेछ। तर यदि यो रिक्त स्थान अलग गर्न को लागी हो, तब ध्यान राख्नुहोस् कि चौडाई अधिक हुनेछ। तेसैले, हामी सधैं उपायहरु लाई राम्रो संग लिनु पर्छ ताकि हामी कमी छैनौं न त हामी समाप्त भैसकेका छौं।
फिक्सेशन प्रणाली: यहाँ तपाइँको आवश्यकताहरु फेरि खेल मा आउँछ। किनभने तिमी सक्छै कुकुर बाधाहरु छन् कि शिकंजा राम्रो संग तय गर्न को लागी छ वा अर्कोतर्फ, सक्शन कप। तेसैले पछिल्लो मामला मा तपाइँ अब पर्खाल वा ढोका आफै ड्रिल गर्न को लागी छ। जे होस् यो सत्य हो कि सबैभन्दा सामान्य हो कि ड्रिल गरीएको हो, किनभने अन्य सामान्यतया सीढीहरु को रूप मा क्षेत्रहरु को लागी हो।
सुरक्षा खोल्ने प्रणाली: जे होस् केहि निश्चित छन्, अरु संग एक छ खुल्ला प्रणाली जुन पूर्ण सुरक्षा छ। बच्न को लागी कि घरपालुवा जनावरहरु यो एक सरल तरीका मा खोल्न सक्छन्, यद्यपि यो सत्य हो कि हामी विरोध गर्दैनौं। तेसैले दुबै पक्षहरु सामान्यतया तय गरीन्छ र एक केन्द्रीय भाग खोल्न र इच्छा मा बन्द गर्न सकिन्छ, जब तपाइँलाई यो आवश्यक हुन्छ।
के यो कुकुर बाधा किन्न लायक छ?
सत्य यो हो कि हो, एक कुकुर बाधा सधैं किन्न लायक छ तर हो, तपाइँ सधैं जान्न को लागी कसरी महान प्रतिरोध छनौट गर्न को लागी कि हुन सक्छ। किनकि हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, यदि हामी ठूला कुकुरहरु संग व्यवहार गर्दैछौं, हामी एक बलियो र अग्लो वा फराकिलो विकल्प को लागी अप्ट गर्न जाँदैछौं। जबकि विपरीत साना नस्लों को लागी सही हुनेछ। तर जे होस् यो हो, तपाइँ एक राम्रो विभेदित ठाउँ हुनेछ जहाँ तपाइँ शान्त वा शान्त हुन सक्नुहुन्छ कि उनीहरु पहुँच गर्दैनन्। किनकी कुकुर बाधाहरु अन्य अलगाव विधिहरु भन्दा बढी विश्वसनीय छन्।
जहाँ एक सस्ता कुकुर बाधा किन्न
किवोको: Kiwoko कुकुर बाधाहरु को एक श्रृंखला छ कि तपाइँ याद गर्नुहुन्न। किनकि उनीहरु प्रतिरोधी सामाग्री बाट बनेका छन्, एकै समयमा, भित्तामा तय गरीएको छ र एक्स्टेन्सिबल छन्। यो पनि उल्लेख गर्न छैन तपाइँसँग मोडेलहरू छन् कि पर्खालमा लंगर हुन आवश्यक छैन.
अमेजन: यो कसरी कम हुन सक्छ, अमेजन मा तपाइँ कुकुरहरु को लागी अनन्त बाधाहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। किनकि तब मात्र तपाइँ ती फिनिशहरुको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ रुचाउनुहुन्छ र सँधै को बारे मा सोच्दै हुनुहुन्छ तपाइँको घरपालुवा जनावरहरु को आवश्यकताहरु। काठ वा धातु विभिन्न आकारहरु संग विकल्पहरु को हो कि तपाइँ सधैं वेब मा पत्ता लगाउनुहुनेछ।
Leroy मर्लिन: लेरोय मर्लिन मा तपाइँ कुकुरहरु को लागी बाधाहरु को रूप मा धेरै विकल्पहरु हुन सक्छ। किनकि उनीहरुसँग सबैभन्दा प्रतिरोधी फिनिश र पक्कै हो, एडेप्टरहरु उनीहरु सधैं आफ्नो ठाउँ अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ। सानो बाट ती अनुकूलन वा लचीला गर्न सक्छन् कि गर्न को लागी।
टेन्डेनिमल: यो पसलहरु मध्ये एक हो जुन पछाडि छोड्न सकिदैन। उनीहरु पनि को हिस्सा हुन् बाधाहरु को मामला मा ठूलो चयन यसको मतलब। सीढी को प्रवेश द्वार मा वा ढोका मा राख्न को लागी सही। ताकि हामी उनीहरुलाई भाग्न वा क्षतिग्रस्त हुन बाट रोक्छौं। अब तपाइँ मात्र एक छ कि सबैभन्दा राम्रो सूट तपाइँ एक छान्नु पर्छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुरका सामानहरू » कुकुरहरु को लागी बाधाहरु